Nnwom 130 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
“Mifi bon mu su frɛ wo”
“Sɛ mfomso na wohwɛ a” (3)
Yehowa de bɔne kyɛ koraa (4)
“Meretwɛn Yehowa denneennen” (6)
Dwom a Wɔde Foro Bepɔw No. 130 O Yehowa, mifi bon mu su frɛ wo.+ 2 O Yehowa, tie me nne. Yɛ aso tie me nkotosrɛ. 3 O Yah,* sɛ mfomso na wohwɛ* a,O Yehowa, anka hena na obetumi agyina w’anim?+ 4 Wo na wode bɔne kyɛ koraa+Sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa besuro wo.+ 5 M’ani da Yehowa so; mede me werɛ nyinaa ahyɛ ne mu;*N’asɛm na m’ani da so. 6 Sɛnea meretwɛn* Yehowa denneennen no,+Ɛkyɛn awɛmfo a wɔretwɛn adekyee;+Ampa, ɛkyɛn awɛmfo a wɔretwɛn adekyee. 7 Momma Israel ntwɛn Yehowa,Efisɛ Yehowa dɔ nni huammɔ,+Na ɔwɔ tumi kɛse a ɔde gye nkwa. 8 Obegye Israel afi wɔn mfomso nyinaa mu.
^ Anaa “wudi akyi.”
^ Anaa “me kra ani da no so.”